AbasekuKhanyeni bayomela isifundazwe kwezomculo | News24
LAST UPDATED: 2019-06-26, 14:02
AbasekuKhanyeni bayomela isifundazwe kwezomculo
ABAFUNDI basesikoleni sabantu abaphila nokukhubazeka Ekukhanyeni Special School eMbali Unit 1 bacela uxhaso lomfaniswano njengoba beqokewe ukuba bayomela isifundazwe saKwaZulu-Natal emculweni wamakwaya ngemuva kokuba bephume phambili kade bemele usiFunda soMgungundlovu ngoLwesine olwedlule mhla zingama -31 kuNhlaba (May).
Lo mncintiswano obizwa nge-South African School Choral Eisteddfod Competition uzobanjelwa e-Rhema Bible Church esifundazweni i-Gauteng mhla zingama-26 kuya mhla zingama -29 kuNhlangulana (June).
Umculisi waleli kwaya uNkk Kedibone Moso uthe bajabule kakhulu ukuthi isikole sabo siyomela isifundazwe kodwa bakhathazekile ngomfaniswano njengoba abanye babafundi babo bengenawo umfaniswano wesikole ophelele kanti abanye abanayo imifaniswano osezingeni elifanele.
“Sajabula kakhulu ukuzwa ukuthi ithina esiwinile lokhu kuyakhombisa ukuthi abafundi bethu banethalente elikhulu kanti bakhombisile ukuthi kunezinto ezinhle nabo abakwazi ukuzenza njengabanye. Sifuna ukufike siwumele kahle uMgungundlovu kanye nesifindazwe kodwa sidinga usizo lo mphakathi ukuze lokhu kuzoba impumelelo. Into esiyidinga kakhulu amasokisi, ama-blazer kanye namabheji esikole kwazise indawo yokuhlala yona izokhokhelwa kanjalo nezindleko zokubamna nazo zizokhokhelwa. Sinabafundi abaculayo abangama-40 sebebonke. Sinxenxa noma ubani ongakwazi ukusilekelela ukuba bafake isandla,” kubeka yena. Uqhube wathi loku kubaluleke kakhulu kubona njengesikole kanye nakubafundi njengoba kungezinye zezinto ezibhekwayo emncintiswaneni wamakwaya.
“Ukubukeka kanye nokugqoka umfaniswano ofanayo kuneqhaza elikhulu elikudlalo kulo mncintiswano. Sizimisele kanti futhi siyathemba ukuthi sizofika siwine kulo mncintiswano njengoba sikwazile ukuthi sphume phambili seloku waqala kwizifunda ezahlukene.”
Ongathanda ukusiza angathintana nothishanhloko enombolweni ethi 082 534 8360 noma inhloko yomnyango ku078 122 4747 okanye eyomculisi wabo uNkk Moso enombolweni ethi 072 585 8491.